Thwebula Norton 2015 22.5.4.24 Security Premium... – Vessoft
Ukuvikelwa Basic zaleli unqulo wesi arab kuphela angakwazi uvimbele umsebenzi lohlobo lwe ukuvimbela engena software nihlole ohlelweni. It ivumela umsebenzisi ukusebenza ngaphandle kokuthikanyezwa, futhi nokuthungatha babelana ukwaziswa the web nge izinga enkulu kwezokuphepha. Isici sici sale unqulo wesi arab kuphela ukuthi unakho 5 amazinga ukuvikelwa evumela ukuthi isuse amagciwane masinya. Ngaphezu kwalokho, Norton kuvimbela ukweba imininingwane kanye amaphasiwedi ngenkathi upheqa izindawo ezihlukahlukene.
Technology Sonar uhlinzekela nizungeze ukuqapha clock kohlelo futhi kususa izinsongo ngokushesha
It ususa ngisho nalezo amagciwane ukuthi nezinye antiviruses skip uma kuthwetshulwa
Ukuvikelwa Technology isekelwe ukuhlaziywa idumela izingosi ezithile
Luvimbe Elihehayo sites
Amazwana on Norton:
Norton Ahlobene software:
English, Українська, Français, Español... Panda Antivirus 2015 15.0.1 Gold, Global, Internet futhi Pro